FISOKAFAN’NY SISIN-TANIN’I MADAGASIKARA: Hanomboka ny 23 Oktobra izao ny sidina avy aty amin’ny Ranomasimbe Indiana – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 9:12
Tsy maintsy hajaina ireo fepetra rehetra efa napetraka (Sary: Air Madagascar)
Accueil/Politika/FISOKAFAN’NY SISIN-TANIN’I MADAGASIKARA: Hanomboka ny 23 Oktobra izao ny sidina avy aty amin’ny Ranomasimbe Indiana
Fanapahan-kevitra lehibe, tsy ho an’ireo mpisehatra amin’ny tontolon’ny fizahantany ihany fa ho an’ny tontolon’ny toekarena malagasy iray manontolo mihitsy, no noraisina teo anivon’ny Filakevitry ny Minisitra omaly. Amin’ny ankapobeny, misokatra ny sisintanin’I Madagasikara. Saingy atao miandalana izany, ary misy fepetra maro tsy maintsy hajaina nampiarahana tamin’ity fanapahankevitra ity.
Lucien R. il y a 4 jours
Nankatoavin’ny Filankevitry ny Minisitra ny fisokafan’ny habakabak’i Madagasikara amin’i Eoropa mankaty Antananarivo, miaraka amin’ny Air Madagascar sy Air France. Afaka miditra ihany koa ireo « vols charters » avy any Milan/Rome Eoropa mankany Nosy-Be Hell-Ville, araka ny tatitra omaly. Mikasika ny sidina na « vol long-courrier » Europe dia hanomboka amin’ny 06 Novambra 2021 izany. Nankatoavina ihany koa ny fisokafan’ny lanitr’i Gasikara amin’ny sidina eo anivon’ny ranomasimbe Indiana, izany hoe : Maurice –Madagasikara (Air Mauritius) sy La Réunion- Madagasikara (Air Austral) ka vinavinaina amin’ny 23 Oktobra 2021 ho avy izao no hiatombohan’izany, araka ny fanazavana. “Ankoatry ny « évacuation sanitaire » dia mila “autorisation spéciale” izay ankatoavin’ny Praiminisitra sy ny Filoham-pirenena ny fidiran’ny « Jet privé » na ny « sidina tsy miankina manokana »”, hoy hatrany ny fanazavana.
Tsy maintsy ferana, hatao mielanelana ny fidiran’ny sidina
Ny Filankevitry ny Minisitra omaly ihany koa no namaritra ireo fepetra samihafa mifandraika amin’izao fanapahankevitra izao. Fantatra, araka izany, fa handoavam-bola manomboka izao ny fitiliana PCR izay hatao amin’ireo olona rehetra miditra eto Madagasikara ka eo amin’ny 25euros eo ny vidin’izany, ary ampidirina ao anatin’ny vidina tapakila na billet d’avion, ary harotsaka ao amin’ny kitapom-bolan’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Mikasika ny fihibohana na ny « confinement » kosa indray dia aharitra iray andro na roa andro izany mandram-pivalin’ny Test PCR izay hatao. Koa raha « négatif » ilay mpandeha dia afaka mivoaka ny toerana nanaovany fihibohana. Raha toa kosa ka « positif » dia manao fihibohana 14 andro. “Tsy maintsy ho ferana ny « fréquence » na ny isan’ireo sidina miditra eto Madagasikara fa tsy hitovy tamin’ny vanim-potoana talohan’ny Coronavirus satria noferan’ny OACI ho adiny dimy ny elanelan’ny sidina miditra amin’ny firenena iray”, hoy ny Filankevitry ny Minisitra.
Raha ny fanazavana dia efa nahazo fankatoavana avy amin’ny OACI I Madagasikara amin’ny fisokafan’ny habakabany indray manomboka izao, saingy hirosoana miandalana izany (ouverture progressive). Nisy hatrany ny fivorian’ny « comité interministériel » nandritry ny volana vitsivitsy mikasika ireo paikady sy fiomanana sy fanatanterahana ireo fepetra maro ahatomombanan’ny fisokafan’ny habakabak’i Madagasikara. Na izany aza, tokony hisy ny famoahana ny lisitr’ireo firenena mbola ao anatin’ny lisitra mena, raha ny tatitra omaly.
ASA FAMPANDROSOANA: Tsy manadino ny vahoakan’I Diana ny Fitondram-panjakana
FEPETRA ARA-TOEKARENA: Efa mandeha ny fividianan’ny Fanjakana ireo vokatry ny tantsaha
ANDRIATONGARIVO LALATIANA: Tsy midika ho fihoaram-pefy ny demokrasia
GOVERNEMANTA NTSAY AMIN’NY ENDRINY VAOVAO: Ho fantatra amin’ity faran’ny herinandro ity ?